Fumana iidolophana ezi-5 ezithandekayo kakhulu | IBezzia
Iidolophu ezi-5 eFrance apho ungathanda ukuhlala khona
Susana Garcia | 07/04/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
IFransi lilizwe eligcwele iikona ezinomtsalane. Iidolophu zayo zinesitayile kwaye siyayithanda iParis okanye iBordeaux, kodwa ngaphaya kwazo kunokwenzeka fumana iidolophana ezimangalisayo zaseFransi eziza kuthatha umphefumlo wakho. Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ubaleke ezixekweni ukuze ufumane ezona ndawo zimangalisayo ezinobuntu obuninzi.
En France kukho iidolophu ezininzi ezintle, kodwa namhlanje siza kuthetha ngezintlanu zazo. Ukuba uyazithanda ezi ntlobo zokundwendwela, zithathele ingqalelo zonke kuba nganye inento enomdla ekunikelayo. Yonwabela amanqaku amatsha okundwendwela ekufuneka ufumene amanqaku eFrance.
Le dolophu ikwisebe leLot kwaye ineendwendwe ezininzi, ngasemva kweMont Saint-Michel. Kule ndawo bekukho ubukho babantu kwiPaleolithic ephezulu, kuba ineCueva de las Maravillas, umqolomba onemizobo yangaphambili yomqolomba. Sisixeko esikwaziyo ukuphambukisa iCamino de Santiago kwaye namhlanje ikhenketho kakhulu. Olunye lotyelelo oluphambili kule ndawo yinqaba, apho ungabona khona amawa kunye neembono zedolophu iphela. Ukuhla ukuze ubone idolophu onakho yiya ngeCamino de la Cruz okanye ngomngcwabo ongaphantsi komhlaba. Inkulungwane ye-XNUMX iPuerta de San Marcial inika indawo yazo ezingcwele kunye nesikwere esihle sengcwele. Kananjalo akufuneki uphoswe yinkonzo yaseSan Amador ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX.
Le ndawo, eyayisele inabemi kwinkulungwane ye-XNUMX BC, inika inqaba entle engashiyi mntu engenamdla. Le citadel yamandulo ibekwe kumazantsi mpuma isinika umtsalane omkhulu. Kungcono ukuyindwendwela ngexesha eliphantsi ukuze ungazibonakalisi kukhenketho olugqithisileyo. Inkqubo ye- I-citadel ineekhilomitha ezingaphezu kwezintathu zodonga ngokubiyelwa ngaphandle kunye nendawo ebiyelweyo ngaphakathi kwaye phakathi kwabo i-lizas, indawo ethe tyaba ejikeleze inqaba. Kwinqaba lenqaba kukho iinqaba ezininzi, amasango anjengeSango laseNarbonne, elihlala lisango lokungena, kwanenqaba. Kuya kufuneka sibone ne-Basilica yaseSaint-Nazaire, enezinto ezithile zaseRoma kodwa ujonge phantse ubuGoth.
Le dolophu ikwiCamino de Santiago kumazantsi eFrance. KwiiConques kufuneka ukonwabele ukuhamba ngezitrato zayo, ubona uyilo lwezindlu zalo, kunye nemithi eyenziwe ngokhuni kunye nophahla eluphahleni. Isikhumbuzo esikhulu sedolophu yi Isitayile saseRomeque Abbey yeConques apho iPortico yesigwebo sokugqibela ime khona. Kuyo ungabona iMyuziyam kaNondyebo enezixhobo. Ezingafanele ziphoswe ziindawo apho amagcisa asebenza khona kunye neevenkile ezincinci ezilalini.
Oku ithathwa njengeyona lali intle eAlsace. Inobume obujikeleze isetyhula ngeenjongo zorhwebo. Malunga neekhilomitha ezintlanu kude kukho umbono wokuqonda ubume beli dolophu. Kuya kufuneka utyelele iRue du Rempant kuba sisitrato apho sinokubona ubume bokwenene bedolophu. Nantsi eyona ndawo ifotwe kakhulu esixekweni, indlu yaseLe Pigeonnier esekoneni kwaye yahlula iindlela ezimbini. Kuya kufuneka sibone i-Place du Chateau, isikwere esibaluleke kakhulu kwilali eneFontana de Saint Leon embindini.
Le yenye yeedolophu ezinomtsalane ekungafuneki ziphoswe. Ukuba ungena nge Rue Grande ufumana iNdawo de la Grande Fontaine eyayiyindawo yokuthengisa endala. Emva kwayo kukho iSikwere seCawa, kunye neCawa yokuguqulwa kukaSanta Paul. Kummandla osemazantsi kukho umbono obekwe phezu kwamangcwaba, indawo enika ezona mbono zibalaseleyo kuyo yonke idolophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Iidolophu ezi-5 eFrance apho ungathanda ukuhlala khona